पाकेको केराको बोक्रामा कालो दाग भएको केरा खानुका यस्ता छन् अदभुत फाइदा… – Khabar Patrika Np
पाकेको केराको बोक्रामा कालो दाग भएको केरा खानुका यस्ता छन् अदभुत फाइदा…
प्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन ०७, २०७८ समय: ९:०९:४३
छिट्टै उर्जा प्रदान गर्ने फलको रुपमा चिनिने केराले तपाईलाई स्वस्थ्य मात्रै राख्दैन, केही जटिल प्रकारका रोगबाट पनि बचाउँछ । पूर्ण रुपमा पाकेको केराले तपाईको शरीरलाई धेरै प्रकारका रोगबाट बचाउँछ । पूर्ण रुपमा
बोक्रामा केही काला दाग देखिन्छन् ।
– केरा पाकेसँगै त्यसमा एन्टी–अक्सीडेन्ट तत्वको स्तर पनि बढेर जान्छ । यो तत्वले तपाईको प्रतिरक्षा तन्त्रलाई अधिक बलियो बनाउँछ । यो तत्वले सेता रक्तकोष निर्माणमा पनि योगदान पुर्याउँछ । – बोक्रामा कालो दाग देखिने गरी पाकेको केरामा प्राकृति शर्कराको मात्रा धेरै हुन्छ । यसले रगतमा शर्कराको मात्रालाई बढाउन मद्दत पुर्याउँछ । यद्यपि मधुमेह रोगबाट पीडित व्यक्तिले भने यो केरा खाँदा होस पुर्याउनु पर्छ ।
यो पनि :खानपिन: ड्राइ फ्रुटको राजा मानिने काजु खर्चको हिसाबले महँगो ड्राइ फ्रुट हो । यसलाई हरकोहिले किनेर खान सक्दैनन् । तर महँगो भए पनि काजुका फाइदा भने अनगिन्ती छन् ।दैनिक २/३ वटा काजुको सेवन गर्दा पनि यसले स्वास्थ्यमा निकै लाभदायक पुर्याउँछ ।
काजुमा म्याग्नेसियम, कपर, आइरन, पोटासियम लगायतका पोषक तत्व पाइन्छ । काजुलाई ऊर्जाको राम्रो स्रोत मानिन्छ ।
यस अलावा यसमा बिभिन्न भिटामीन, क्याल्सियम लगायतका तत्व समेत पाइन्छ । जसले शरीरमा अनेकौं प्रकारको लाभ पुर्याउँछ । यस्तो छ काजु सेवनबाट हुने फाइदाहरु :
१. बिना परिश्रम थकान महसुस भएमा काजुको सेवनले शरीरमा ऊर्जा प्राप्त हुन्छ ।२. काजुमा भिटामिन बी प्रचुर मात्रामा पाइन्छ यसले दिमाग तेजिलो बनाउँछ ।३. युरीक एसिडमा काजुको सेवन गर्न मिल्दछ, यसले युरिक एसिड फर्मेसन हुँदैन ।४. नियमित काजु खाँदा रक्तचाप नियन्त्रित अवस्थामा रहन्छ ।५. नियमित बिहान काजु खाँदा कोलेस्टेरोलको मात्रा नियन्त्रित हुन्छ ।
६. काजुको नियमित सेवनले हड्डी तथा दाँत बलियो बनाउँछ ।७. काजुमा प्रोटिनको मात्रा उच्च हुन्छ त्यसैले काजु खादाँ अनुहार चम्किलो हुन्छ ।८. काजुको लेपले अनुहारमा मसाज गर्नाले अनुहार अझ बढी चम्किलो हुन्छ ।
खानपिन: ड्राइ फ्रुटको राजा मानिने काजु खर्चको हिसाबले महँगो ड्राइ फ्रुट हो । यसलाई हरकोहिले किनेर खान सक्दैनन् । तर महँगो भए पनि काजुका फाइदा भने अनगिन्ती छन् ।दैनिक २/३ वटा काजुको सेवन गर्दा पनि यसले स्वास्थ्यमा निकै लाभदायक पुर्याउँछ ।